iRiphabliki yaseNingizimu Afrika yizwe eliseningizimu ezwenikazi lase Afrika yaziwa ngokusemthethweni ngokuthi iRiphabliki yaseNingizimu Afrika. Ihlanganiswa amakhilomitha ayizi-2,798 agudle usebe lolwandle okuyi iNdiyeni kanye ne-Atlanthiki. Amazwe angomakhelwane ahlanganisa iNamibhiya, iBotswana, iZimbabwe, Mozambiki kanye neSwazi; iLesotho iyizwe elincane elizungezwe iNingizimu Afrika. Umongameli waseNingizimu Afrika ngu Mnz.Matamela Cyril Ramaphosa (okuningi).
Izinkolo: True Jesus Church - uNkulunkulu - iBhayibheli - uKhisimusi - iPhasika - insindiso - umoya ongcwele - isonto - izulu - ingelosi - uBudha - Inkolo kaBudha
Retrieved from "http://zu.wikipedia.org/w/index.php?title=Ikhasi_Elikhulu&oldid=50924"